မေတ္တာစစ် မေတ္တာမှန်နဲ့ ချစ်တယ်ဆိုတာ ဒီလိုမျိုးပါ... - Barnyar Barnyar
May 26, 2022 thanzin laypyay ချစ်ရေးချစ်ရာ 0
မတ်ေတာစဈ မတ်ေတာမှနျနဲ့ ခဈြတယျဆိုတာ ဒီလိုမြိုးပါ...
အချစ်ဆိုတာ… နှလုံးသားချင်း ဆက်နွယ်နေမှ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အရာတစ်ခုပါ၊ အချစ်ကံကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတွေကတော့ ဒီလိုယောကျာ်းမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားရမှာပါနော်။ သင်ရော ပိုင်ဆိုင် ထားရပြီးလား… ။ ပိုင်ဆိုင်ထားရပြီးဆို အရင်ကထက် ပိုလိမ္မာပါတော့နော်….
(၁) သင့်ကို နားလည်မှု အပြည့်ပေးထားတယ်… ”
ဘယ်လောက်တောင် ချစ်တယ်ဆိုရင် သင့်ကို ချုပ်ချယ်ထားတာမျိုး မရှိဘဲ စိတ်ချမ်းသာအောင် အမြဲ နားလည်မှုပေးထားသူ တစ်ယောက်ပါ…။
မကောင်းတာဆိုရင်တော့ ဆိုးဆုံးမတတ်တာက လွဲရင် သင့်ကို အမြဲလွတ်လပ်စွာ နားလည်မှု အပြည့်နဲ့ နေခိုင်းတယ်…။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပြင်သွားမယ်ဆိုရင်လည်း သူ့ကိုယ်တိုင် လိုက်ပို့ပေးတာမျိုး ဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပေးတယ် ။ သင့်ပျော်နေတာ မြင်ရရင် သူ့စိတ်ထဲ လည်း ပျော်နေတတ် တာမျိုးပေါ့။
(၂) သင့်ကို အမြဲဂရုစိုက်တယ် ”
အသက်နဲ့ အမျှ ချစ်တဲ့ ယောကျာ်းဆိုတာ သင့်ရဲ့ အရာအားလုံး အသေးအမွှေားလေးတွေကအစ ဂရုစိုက်နေတတ်သူပါ… ။
သင်နေမကောင်းခဲ့ရင်တောင် အဖေ တစ်ယောက်လို၊ အစ်ကိုကြီး တစ်ယောက်လို ဆေးသောက်ဖို့ ၊ အစားပုံမှန်စားဖို့ကို တဖွဖွ မှာပြီး ဂရုစိုက် နေတတ် တယ်… ။
သင်နေမကောင်း ဖြစ်ရင် အပြစ်ရှိတယ်လို့ ခံယူ နေသူပါ… ။ သင်အားငယ် နေချိန် သင့်အနားမှာ ဖေးမ ကူညီတတ်ပြီး သင်ဝမ်းနည်းရင် သူ့စိတ်ထဲလည်း မကောင်း ဖြစ်နေ တတ်ပါတယ်။
(၃) သင်ဟာ သူ့ရဲ့ဘဝပါ ”
သူ့အလုပ်တွေ ဘယ်လောက်ပဲ ပင်ပန်း နေပါစေ၊ အလုပ်တွေ ဘယ်လောက်ပဲ ရှုပ်နေပါစေ သင်နဲ့ တွေ့ရရင် ပင်ပန်းတာတွေ ပျောက်သွားတယ်… ။
သင့်အတွက်ဆို ညည်းနေရတာမျိုး မရှိဘဲ သင့်စိတ်ကြိုက် ဖြစ်အောင် အမြဲနေပေး တတ်တယ်… ။ အလုပ်ဆိုတာကလည်း သင့်ကို ချမ်းချမ်းသာသာ ထားစေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့် လုပ်နေရသလို သူ့အနာဂတ် တစ်ခုလုံးက သင်နဲ့ပဲ ဖြစ်နေမှာပါ။
(၄) သင့်ကို ခွင့်လွတ်မြဲ ခွင့်လွှတ်တယ် ”
သင့်ကို သူဘယ်လောက်ထိ ချစ်လဲဆိုရင်… တခြားသူတွေအတွက်ဆို ခွင့်လွှတ်ပေးလို့မရတဲ့ အပြစ်မျိုးဖြစ်နေရင်တောင် သူ့သင်ကို ခွင့်လွှတ်မြဲ ၊ ခွင့်လွှတ်ဆဲပါ… ။
သူ နဲ့ တွဲနေရက်နဲ့ သင့်က တခြားတစ်ယောက်နဲ့ တွဲနေတာမျိုးကိုတောင် သင့်ကို ခွင့်လွှတ်ပေးပြီး ဆက်တွဲနေတတ်တယ်… ။ သူ့တုံးလို့ ၊ အလို့မဟုတ်ဘဲ သင့်ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရမှာ ကြောက်လို့ပါ… ။ ဒီလိုမျိုး ချစ်သူကောင်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားရပြီးဆို အရမ်းမဆိုးပါနဲ့။
(၅) သင်က ဘုရင်မ ”
သင်က သူ့ဘဝအတွက် အလင်းပါ… ။ သူ့မှာ တစ်နေ့လုံး အလုပ်တွေ ရှုပ်နေရင်တောင် သင်အတွက် အချိန်ပေးပြီး date ပေးတယ်… ။
သူ့အလုပ်တွေကြောင့် ပင်ပန်းနေရင်တောင် ပင်ပန်းတယ်လို့ မညည်းဘဲ သင့်အတွက် အချိန်ပေးတယ်… ။ သင်စိတ်ဆိုးနေလည်း သင့်ကို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ချော့တယ်… ။ အကြောင်းကတော့ သင့်က သူ့ဘဝအတွက် ဘုရင်မဖြစ်နေလို့ပါပဲနော်။Credit
မတ်ေတာစဈ မတ်ေတာမှနျနဲ့ ခဈြတယျဆိုတာ ဒီလိုမြိုးပါ…
အခဈြဆိုတာ… နှလုံးသားခငျြး ဆကျနှယျနမှေ ဖွဈပျေါလာတဲ့ အရာတဈခုပါ၊ အခဈြကံကောငျးတဲ့ မိနျးကလေးတှကေတော့ ဒီလိုယောကျြားမြိုးကို ပိုငျဆိုငျထားရမှာပါနျော။ သငျရော ပိုငျဆိုငျ ထားရပွီးလား… ။ ပိုငျဆိုငျထားရပွီးဆို အရငျကထကျ ပိုလိမ်မာပါတော့နျော….
(၁) သငျ့ကို နားလညျမှု အပွညျ့ပေးထားတယျ… ”
ဘယျလောကျတောငျ ခဈြတယျဆိုရငျ သငျ့ကို ခြုပျခယျြထားတာမြိုး မရှိဘဲ စိတျခမျြးသာအောငျ အမွဲ နားလညျမှုပေးထားသူ တဈယောကျပါ…။
မကောငျးတာဆိုရငျတော့ ဆိုးဆုံးမတတျတာက လှဲရငျ သငျ့ကို အမွဲလှတျလပျစှာ နားလညျမှု အပွညျ့နဲ့ နခေိုငျးတယျ…။
သူငယျခငျြးတှနေဲ့ အပွငျသှားမယျဆိုရငျလညျး သူ့ကိုယျတိုငျ လိုကျပို့ပေးတာမြိုး ဖွဈဖွဈ လုပျပေးတယျ ။ သငျ့ပြျောနတော မွငျရရငျ သူ့စိတျထဲ လညျး ပြျောနတေတျ တာမြိုးပေါ့။
(၂) သငျ့ကို အမွဲဂရုစိုကျတယျ ”
အသကျနဲ့ အမြှ ခဈြတဲ့ ယောကျြားဆိုတာ သငျ့ရဲ့ အရာအားလုံး အသေးအမှေားလေးတှကေအစ ဂရုစိုကျနတေတျသူပါ… ။
သငျနမေကောငျးခဲ့ရငျတောငျ အဖေ တဈယောကျလို၊ အဈကိုကွီး တဈယောကျလို ဆေးသောကျဖို့ ၊ အစားပုံမှနျစားဖို့ကို တဖှဖှ မှာပွီး ဂရုစိုကျ နတေတျ တယျ… ။
သငျနမေကောငျး ဖွဈရငျ အပွဈရှိတယျလို့ ခံယူ နသေူပါ… ။ သငျအားငယျ နခြေိနျ သငျ့အနားမှာ ဖေးမ ကူညီတတျပွီး သငျဝမျးနညျးရငျ သူ့စိတျထဲလညျး မကောငျး ဖွဈနေ တတျပါတယျ။
(၃) သငျဟာ သူ့ရဲ့ဘဝပါ ”
သူ့အလုပျတှေ ဘယျလောကျပဲ ပငျပနျး နပေါစေ၊ အလုပျတှေ ဘယျလောကျပဲ ရှုပျနပေါစေ သငျနဲ့ တှရေ့ရငျ ပငျပနျးတာတှေ ပြောကျသှားတယျ… ။
သငျ့အတှကျဆို ညညျးနရေတာမြိုး မရှိဘဲ သငျ့စိတျကွိုကျ ဖွဈအောငျ အမွဲနပေေး တတျတယျ… ။ အလုပျဆိုတာကလညျး သငျ့ကို ခမျြးခမျြးသာသာ ထားစခေငျြတဲ့ ရညျရှယျခကျြကွောငျ့ လုပျနရေသလို သူ့အနာဂတျ တဈခုလုံးက သငျနဲ့ပဲ ဖွဈနမှောပါ။
(၄) သငျ့ကို ခှငျ့လှတျမွဲ ခှငျ့လှတျတယျ ”
သငျ့ကို သူဘယျလောကျထိ ခဈြလဲဆိုရငျ… တခွားသူတှအေတှကျဆို ခှငျ့လှတျပေးလို့မရတဲ့ အပွဈမြိုးဖွဈနရေငျတောငျ သူ့သငျကို ခှငျ့လှတျမွဲ ၊ ခှငျ့လှတျဆဲပါ… ။
သူ နဲ့ တှဲနရေကျနဲ့ သငျ့က တခွားတဈယောကျနဲ့ တှဲနတောမြိုးကိုတောငျ သငျ့ကို ခှငျ့လှတျပေးပွီး ဆကျတှဲနတေတျတယျ… ။ သူ့တုံးလို့ ၊ အလို့မဟုတျဘဲ သငျ့ကို ဆုံးရှုံးလိုကျရမှာ ကွောကျလို့ပါ… ။ ဒီလိုမြိုး ခဈြသူကောငျလေးကို ပိုငျဆိုငျထားရပွီးဆို အရမျးမဆိုးပါနဲ့။
(၅) သငျက ဘုရငျမ ”
သငျက သူ့ဘဝအတှကျ အလငျးပါ… ။ သူ့မှာ တဈနလေုံ့း အလုပျတှေ ရှုပျနရေငျတောငျ သငျအတှကျ အခြိနျပေးပွီး date ပေးတယျ… ။
သူ့အလုပျတှကွေောငျ့ ပငျပနျးနရေငျတောငျ ပငျပနျးတယျလို့ မညညျးဘဲ သငျ့အတှကျ အခြိနျပေးတယျ… ။ သငျစိတျဆိုးနလေညျး သငျ့ကို စိတျရှညျရှညျနဲ့ ခြော့တယျ… ။ အကွောငျးကတော့ သငျ့က သူ့ဘဝအတှကျ ဘုရငျမဖွဈနလေို့ပါပဲနျော။Credit
အောင်မြင်တဲ့လူတစ်ယောက်က ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ဝေဖန်ခြင်းဒဏ် ခံနိုင်ရည်ရှိကြရတယ် (တန်ဖိုးရှိသောစာ)
Total Hits : 336047